Kedu ihe na egwu na otu esi akpụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe bụ scree
Na geology anyị nwere ike ịhụ usoro dị iche iche nke ga-abụ n'ihi ụfọdụ usoro usoro ala. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe a kanchal. Ọ bụ mkpokọta ihe mkpofu dị n'okpuru ụkwụ ugwu ndị a. Anyị nwekwara ike ịchọta ha na mbara ọzara ụfọdụ.
N'isiokwu a anyị ga-ekwu maka njirimara nke njacha na otu esi akpụ ya.
1 Kedu ihe bụ scree
2 Etu esi akpụ akpụ
3 Ofdị ihu igwe
3.1 Oge ihu igwe
4 Chemical na ndu ihu igwe
Ọ bụ mkpokọta mkpofu, ya bụ, obere okwute di n’elu ugwu. Nkuzi nke scree bụ n'ihi ihu igwe nke ugwu ugwu. Nweta ihu igwe nwere ike ime n'ihi oke ikuku, mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ, oyi na thaing, yana mgbanwe na nrụgide. Ka oge na-aga, nkume ndị ahụ na-akụda ma na-agbanwe, n'ụzọ dị otú a nke na ha na-akwụsị ikewapụ ma na-agbada na mkpọda ahụ.
Nchịkọta nke obere okwute nke usoro ihu igwe na-ekewasị bụ ihe anyị na-akpọ scree. Enwere ike ịchọta Scots ọtụtụ mgbe na mpaghara ugwu. Mgbe okpomọkụ dị na mpaghara ugwu na-agbadata n'okpuru efu (nke a na-eme ọtụtụ oge n'oge oyi) obere mmiri ozuzo na-agbakọta na nri nke nkume na-amalite usoro mmiri oyi. Ice nwere oke mmiri karịa mmiri mmiri ka ọ na - eme ka nri di elu bawanye. O doro anya, usoro a na-ewe ọtụtụ afọ na afọ.
Ka oge na-aga na ọrụ nke ịgba mmiri, mgbawa nke nkume na-ebu ibu ruo mgbe ha mere ka a na-eri nkume ahụ na obere iberibe site n'eziokwu nke ihe ndị ọzọ na-ahụ maka ihu igwe dị ka mgbanwe nke okpomọkụ. N'etiti ehihie na abalị .
Mpaghara nkume ndị a na-adịkarị agagharị. Enweghị ala ọ bụla ebe ha nwere ike ịkwado, n'ihi ya, ha na-agagharị ma nọgide na-ebi na obere iberibe okwute. Nọmalị, anyị nwere ike ịchọta scree na ebe ebe okpomọkụ njupụta bụ nnọọ elu, oké elu na osisi na-emekarị nwere e ji mara ndị dị otú ahụ dị ka ogologo mgbọrọgwụ, nso n'elu ma ọ bụ crass epupụta.
Etu esi akpụ akpụ
Usoro nke a na-eme site na ihu igwe. Weathering bụ usoro nke nkume na-emebi ma na-agbawa n'ihi na ndị na-ahụ maka anụ ahụ, kemịkalụ na ikuku. Ọ bụ ezie na n’obere oke, ndị na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ na-ekerekwa òkè.
Nkume ndị ihu igwe na-emetụta dị na ma ọ bụ n'akụkụ ala ụwa. Nkume ndị a na-agbari n'ime iberibe uzo di iche iche ma gbari, na-emeputa mineral ohuru. Ọ bụ mbuze na-enyere aka ịwepụ na ibuga nkume ndị gbawara agbawa. Usoro nhazi ihu igwe bụ nke na-enyere aka nke mbuze n'otu ebe.
Ofdị ihu igwe
Oge ihu igwe
E nwere ọtụtụ ụdị ihu igwe na nke ọ bụla na-eme n'ụzọ dị iche. N'otu aka ahụ, ihu igwe nkịtị bụ ihe kpatara mbibi nke nkume. Otú ọ dị, nkwụsịtụ a anaghị agbanwe kemịkal ma ọ bụ ihe omimi nke nkume. Nkume ahụ na-etisasị ma na-akpụ obere okwute. Ka mbuze na-ebu obere, ọ na-arụ ọrụ n'ike karịa ma enwere ike ibufe ọtụtụ irighiri ihe. Njirimara anụ ahụ ga-agbanwe, mana nke kemịkal na-adịgide. Ọnọdụ ihu igwe a ga-akpata ụfọdụ ndị ọrụ gburugburu ebe obibi dị ka ihe mmiri, mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ, nnu nnu, na ndị ọzọ.
Ihu igwe nkịtị ekwesịghị ime n'elu ala. O nwere ike ịda site na nrụrụ aka nke okwute ndị ahụ etolite na omimi miri emi na-arigo na elu. Mgbanwe ndị a na-agbanwe bụ ihe na-eme dilation nke nkume ahụ ma, ya mere, nhazi nke mgbawa ya.
Formdị ọzọ nke ihu igwe nkịtị mara dị ka thermoclasty. Ihe ndị a bụ mgbawa na-etolite n’elu okwute n’ihi mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ. N'ehihie, nkume ahụ na-ekpo ọkụ ma na-agbasawanye ma n'abalị na-ajụkwa oyi ma na-ebelata. Ka oge na-aga, okwute ahụ mechara mebie. Ọnọdụ ihu igwe a bụ otu n'ime oge kachasị, ọkachasị na mpaghara oke oke ọkụ dị ka ọzara. Granite nkume nwekwara ike ịta ahụhụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ. Nkume ndị a na-enweta radieshon nke anyanwụ na akwa nke granite, yabụ ọnọdụ okpomọkụ na-ebili ma gbasaa nanị centimita ole na ole site na elu ya. Ka ha na-ajụ oyi, ha na-ekewapụ na nkume ndị ọzọ, ọ bụ ya mere eji akpọ ha exfoliation na bọọlụ.
Haloclasty bụ ụdị ihu igwe ọzọ nke na-eme n'ihi mmetụta nke nnu etinyere n'osisi nke okwute ya na nkpuchi ya. Mgbe nkume na-eti mkpu olu ya na-abawanye. N'ụzọ dị otú a, nrụgide dị n'ime nkume ahụ na-abawanye, dị ka ọ na-eme na gelling, ma na-eme ka obere iberibe iberibe mebie. Nkume ndị tara ahụhụ n'ụdị ihu igwe a nwere akụkụ nwere akụkụ nkuku ma pere mpe nke na mbuze na-eme n'ụzọ siri ike karị.
Chemical na ndu ihu igwe
Igwe ihu igwe bụ nke na-eme mgbe oke nkume gbanwere ihe mejupụtara ya site na ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ mmiri ozuzo na-emetụta okwute limestone. Mmiri ozuzo nwere carbon dioxide nke, mgbe ọ na-abanye na nkume nzu, na-akpụ ihe a maara dị ka calcite. Calcium carbonate dị n'okwute okwute na-agwakọta na carbon dioxide iji mepụta calcite. N'ihi mmeghachi omume a nke kemịkal ga-abụ usoro dị ka nke a stalactites na stalagmites.
N'ikpeazụ, anyị na-ekwu maka ndu ihu igwe. Ọ bụ banyere mmetụta sitere n’omume nke ihe ndị dị ndụ na-adị ndụ n’elu nkume. Dịka ọmụmaatụ ikpuru, larvae, ahụhụ, wdg. Omume nke ihe ndị a na-agbawa nkume ruo oge.
Maka otu n'ime ihe ndị a, nsogbu nwere ike ịmalite. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ubi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kedu ihe bụ scree
Kedu ihe bụ ecotone